Miharatsy Kokoa Ny Mahazo Ny Vondrona Mpanohana Ny Tanora LGBT Malaza Indrindra Ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Septambra 2015 4:00 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, English, русский, polski, Français, Deutsch, English
Mpanao fihetsiketsehana LGBT notafihana tao Pride ao St. Petersburg, Rosia. 29 Jiona 2013, sary avy amin'i Ekaterina Danilova. Sary: Demotix.
Misy fikambanana sasany toa natao mba hiharan'ny fanarahamaso ataon'ny manampahefana Rosiana. Iray amin'izany ny Children-404, vondrom-piarahamonina antserasera mpanohana ny tanora LGBT. Tamin'ny Alatsinainy 21 Septambra, nanome baiko ny Vkontakte – tambajotra sosialy malaza indrindra ao amin'ny firenena – mba hanakatona ny kaontin'ny Ankizy-404 ao amin'ny habaka, miaraka amin'ny kaontin'ireo vondrona LGBT efatra hafa ny sampam-panjakana mpanara-maso ny fampitam-baovao ao Rosia, Roskomnadzor :
Nampiharin'ny Roskomnadzor ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fitsarana ao Barnaul, izay manasokajy ireo vondrom-piarahamonina dimy ahitana tanora LGBT ho “fampielezan-kevitra pelaka” tsy ara-dalàna.” Nanamari-tena ireo mpanivana ary nilaza fa ilaina ho amin'ny fiarovana ny tanora tsy ampy taona ny fepetra noraisina:
Mikasika izany, ahitana dokambarotra manokana momba ny fihaonana amin'ireo tanora ireo vondrom-piarahamonina hitadiavana firaisana ara-nofo tsy nentin-drazana, sary manaitaitra misy firaisana ara-nofo eo amin'ny tanora sy olon-dehibe ary karazana vaovao hafa tsy ara-dalàna.
Nilaza ny manampahefana fa manana telo andro ireo fiarahamonina LGBT mba hanaisotra ny votoatin'izy ireo tsy ara-dalàna raha tsy te hizaka ny vokany. Nilaza ny mpanorina ny Ankizy-404, Lena Klimova fa tsy nofaritan'ny manampahefana hoe inona no votoaty tsy manara-dalàna ao amin'ny vondron'izy ireo.
Raha mandà ny hampihatra ny baiko ny habaka, mety hiharan'ny fanakatonana tanteraka avy amin'ireo mpamatsy aterineto Rosiana ny Vkontakte. Na dia ireo pejin'ny Ankizy-404 sy ireo vondrom-piarahamonina LGBT hafa voakasika ihany aza no tian'ny manampahefana hakatona, mahatonga izany ho sarotra tanterahina ny foto-drafitrasa ara-teknikan'ny Vkontakte. Miasa amin'ny HTTPS, arofenitra azo antoka mahatonga ireo mpanaramaso ny zotran-tserasera ho sahirana hahita izay pejy tsidihan'ny mpiserasera ao anaty tranonkala ny Vkontakte. Raha tsy tian'ny manampahefana Rosiana hahita ireo pejin'ny Ankizy-404 sy ireo mpiara-dia aminy ny mpiserasera, mety hakaton'izy ireo ny tambajotra sosialy manontolo, fihetsika izay mety hiteraka tabataba eo amin'ny tanora Rosiana.
Lena Klimova, mpanorina ny “Children-404.” Sary tao amin'ny Facebook
Nilaza i Klimova fa nahafantatra ny fihetsiky ny Roskomnadzor tamin'ny alalan'ireo mpanao gazety izy. “Tena mampihomehy,” hoy i Klimova nanoratra. “Ao amin'ny 404 izahay mandrara hatrany ny olona mba tsy hametraka dokambarotra manokana, miezaka miserasera, mandefa zavatra toy ny: ‘Manorata amiko, te-hihaona amin'ny olona aho.'” Raha ny marina, manaramaso akaiky izay sary zaraina amin'ny mpiserasera ny vondrona, matetika manafina ny mombamomba ny olona nalaina sary, ary misoroka ny zavatra tahaka ny “manaitaitra” noresahin'ny Roskomnadzor.
Nanamafy i George Lobushkin, mpitondratenin'ny Vkontakte fa efa voarainy ny baiko avy amin'ny Roskomnadzor mba hanaisotra ireo fiarahamonina tanora LGBT “maromaro”. Nilaza i Lobushkin fa mbola mandinika ny baiko fanesorana ny Vkontakte, nitatitra kosa ny tranonkala TJournal.ru fa efa nakaton'ny Vkontakte ireo efatra hafa, vondrona LGBT tsy dia malaza voatonona tao anatin'ny didim-pitsarana, anisan'izany ny Tanora Pelaka sy Sady Lahy no Vavy- Mitsambikìna aty Amiko, ny Pelaka sy ny Manana Fitaovam-pananahana Roa ao Barnaul , Ankizy Lokon'ny Lanitra, ary ny Fampihaonana Pelaka latsaky ny 25 taona ao Barnaul!
Nandritra ny firesahana tamin'ny gazety Vedomosti momba ny Ankizy-404, nilaza ny mpitondra tenin'ny Roskomnadzor, Vadim Ampelonsky hoe: “Indrisy, tsy ahafahany hanao zavatra ao anatin'ny lalàna ny fientanam-pon'ny mpandrindra ny tetikasa” ary tokony hodinihan'ny manampahaizana manokana ny “lohahevitra manahirana sy saropady toy ny fampidirana ny tanora ho ao anaty fiarahamonina”. Mahaliana fa namerina ny fanehoan-kevitr'i Ampelonsky saiky isaky ny voambolana tamin'ny fanambarana an-gazety navoaka tao amin'ny pejy Vkontakten'ny vondrona i Kirill Grinchenko, mpitondratenin'ny MediaGuard, vondrona mifandray amin'ny sampana tanora ao amin'ny antokon'ny fitondrana Rosia Tafatambatra.
Tsy vao voalohany ny vondrona mpomba an'i Kremlin, izay mikendry hanaramaso ny habaka ahitana votoaty tsy ara-dalàna sy mamohehatra no nanenjika ny Ankizy-404. Tamin'ny Septambra 2014, nametraka fitoriana ny Ankizy-404 tamin'ny lehiben'ny fampanoavana sy ny Roskomnadzor ny MediaGuard . Tamin'ny volana Jolay 2015, nanatontosa fanangonan-tsonia manohitra ny vondrona Klimov ny MediaGuard, na dia nofafan'ny Azaaz.org aza izany afaka tapa-bolana. Vavolombelona tamin'ny raharaham-pitsarana ny MediaGuard izay niafara tamin'ny fandoavan'i Klimova onitra 50.000 roubles (eo amin'ny 750 dolara) noho izy voalaza fa nanitsakitsaka ny lalàna manohitra ny fampielezan-kevitra pelaka ao Rosia. Notsipahan'ny fitsarana ambony izany fandoavana onitra izany taty aoriana.
“Tsy resaka fangejana ny fiarahamonina LGBT izany,” hoy i Grinchenko tamin'ny RuNet Echo. “Fa fanajana ny lalànan'ny aterineto ao Rosia. Ataovy amin'ny fomba hafa: manaraka ny lalàna amin'ny hentitra isika. Ary araka ny hevitray, manitsakitsaka ny lalàna ity vondrona [Ankizy-404] ity amin'izao fotoana izao araka ny nodidian'ny fitsarana. “
Na dia feno fanehoan-kevitra feno fankahalana sy fandrahonana aza ny pejy Vkontakte an'i Klimova (izay efa mahazatra azy), nilaza tamin'ny vondrony sy ireo mpanohana azy izy mba tsy hatahotra. “Tsy fantatro izay tokony hisaorana amin'izany dokam-barotra [mahafinaritra] izany!” hoy izy nanoratra. “Manana mpamaky be dia be sy mpikambana vaovao niditra androany izahay aloha hatreto tamin'ity taona ity,” hoy izy nanampy. Manana mpikambana maherin'ny 66.500 ao amin'ny Vkontakte ny Ankizy-404 amin'izao fotoana izao ary mbola betsaka koa ao amin'ny Facebook sy fampitam-baovao sosialy hafa.